Erectile Dysfunction (ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းပြဿနာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Erectile Dysfunction (ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းပြဿနာ)
Erectile Dysfunction (ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းပြဿနာ) ကဘာလဲ။
“ပန်းညှိုးခြင်း တစ်နည်းအားဖြင့် ပန်းသေခြင်း ဆိုသည်မှာ အရွယ်ရောက်ပြီးအမျိုးသားတစ်ဦးသည် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန် လိင်အင်္ဂါအား ထောင်မတ်စေမှု မပြုနိုင်ခြင်း သို့ ထောင်မတ်မှုအား ထိန်းမထားနိုင်ခြင်း အခြေအနေကို ဖော်ပြသော ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။”
တစ်ခါတစ်ရံ ပန်းညှိုးခြင်း ဖြစ်တာဟာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် ပန်းညှိုးခြင်း ဆက်တိုက်ဖြစ်နေရင်တော့ သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုတွေပေးလာနိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာစေပြီး အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာပေးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်းညှိုးခြင်း ပြဿနာဟာ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူသင့်သည့် ကျန်းမာရေး လက္ခဏာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ ငုပ်နေတဲ့ ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုကို ကုသလိုက်နိုင်ရုံနဲ့ ပန်းညှိုးခြင်း ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်သလို တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပန်းညှိုးခြင်းကို တိုက်ရိုက်ကုသရခြင်း၊ ပန်းညှိုးခြင်းအတွက် ဆေးဝါးသောက်သုံးရခြင်း အခြေအနေများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။
သင်ဟာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြရမှာ ရှက်နေပြီး စိတ်မပါခြင်း ဖြစ်နေစေကာမူ သင့်မှာ ပန်းညှိုးခြင်း ဖြစ်နေတာ ရက်သတ္တပတ်မကရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြပြီး အကူအညီယူသင့်နေပါပြီ။ ပထမဆုံး ဆရာဝန်တွေက သင့်ရဲ့ ယေဘုယျကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သိရှိရန် စမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ပန်းညှိုးခြင်း ဟာ ဒီထက်မက ပိုဆိုးနိုင်တဲ့ ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတစ်ခု ဟုတ်မဟုတ် သုံ့သပ်ကြပါလိမ့်မယ်၊ ဥပမာ။ ။ နှလုံးရောဂါ ( နှလုံး၏ သွေးညှစ်ပေးမှုမှာ အနှောင့်အယှက် သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိနေလျှင် ပန်းညှိုးခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်)
Erectile Dysfunction (ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းပြဿနာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပန်းညှိုးခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် ဖြစ်ရသော အကြောင်းများမှာ
• လိင်တံသို့သွားသည့် သွေးကြောများ ကျဉ်းခြင်း – များသောအားဖြင့် သွေးတိုးခြင်း၊ သွေးတွင်း အဆီများခြင်း သို့ ဆီးချိုသွေးချို။
• ဟော်မုန်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိခြင်း
• ယခင်က ခွဲစိပ်မှု သို့ ထိခိုက်မှု ရှိခဲ့ဖူးခြင်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် ဖြစ်ရသော အကြောင်းများမှာ
• အမျိူးသမီးနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ အဆင်မပြေခြင်း
Erectile Dysfunction (ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းပြဿနာ) မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ?
၁။ ကိုယ်သောက်သည့် ဆေးဝါးတွေကို သတိထားပါ။
သာမာန် ဝယ်လို့၇တဲ့ နှာစေး၊ချောင်းဆိုး၊တုပ်ကွေးပျောက်ဆေး၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နှင့် သောက်ရတဲ့ စိတ်ကျဆေး၊ သွေးထိန်းဆေး၊ မူးယစ်ဆေးပါတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေဟာ သင့်လိင်တံထောင်မတ်နိုင်စွမ်းကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်ဆေးပဲ သောက်သောက် ဆရာဝန်နှင့် အရင်တိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်ပါ။
၂။ ဗိုက်မပူအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
ခါးဆိုဒ် ၃၉ နှင့် အထက်ရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ ခါးဆိုဒ် ၃၅ နှင့်အောက် ရှိတဲ့သူတွေထက် ပန်းညှိုးခြင်းဖြစ်နိုင်ချေ နှစ်ဆရှိပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ သင့်သွေးကြောတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် လိင်အင်္ဂါထောင်မတ်နိုင်မှုကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်လိင်တံမှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ထိခိုက်စေပြီး ခန္ဓါကိုယ်တွင်းသွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း ဟန့်တားနိုင်ပါသည်။
၄။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ သို့ အလုပ်ကစိတ်ဖိစီးစရာတွေကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ။
သေချာတာကတော့ စိတ်ပူပန်သောကတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်မှာ ဆိုးဝါးတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်သော်လည်း စိတ်ဖိစီးနေတဲ့ အသက် ၄၀ နှင့် ၅၀ အမျိုးသားတွေဟာ လိင်စွမ်းဆောင်မှုမှာ အခက်တွေ့နေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းသေပန်းညှိုးပြဿနာ ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြရမှာ ရှက်နေ ကြောက်နေရင်တောင် သွားပြသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပန်းညှိုးခြင်း ဟာ မကုပဲထားရင် ပိုဆိုးလာနိုင်ပြီး သင့်ဘဝကို အပျက်သဘောသာ ဆောင်စေပါလိမ့်မယ်။
Erectile Dysfunction. https://medlineplus.gov/erectiledysfunction.html Accessed February 4, 2017erectile dysfunction. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/erectile-dysfunction/basics/definition/con-20034244 Accessed February 4, 2017